MWC 2020: sababaha munaasabaddan loo joojiyay oo aan loo yeelin kuwa kale | Androidsis
Waa maxay sababta loo joojiyay MWC 2020 laakiin carwooyinka kale ay wali socdaan?
Shaki la'aan, ka baajinta Shirweynaha Mobilka Adduunka waxay dharbaaxo adag ku noqotay waaxda. Haa, carwadii ugu weyneyd ee telefoon adduunka waa in la joojiyaa sababta oo ah Coronavirus, aafada halista ah ee ku haysa muwaadiniinta Shiinaha, marka lagu daro bilaabida inay ku faafto dalal kale. Dhibaatadu waa taas, in kasta oo ay MWC 2020, waxaa jira dhacdooyin kale oo sare oo sare oo sii wadaya inay ku dhacaan si caadi ah.
Tusaale cad ayaa ah ISE 2020, waa carwada ugu weyn ee waaxda AV aduunka oo dhan, waxaana lagu qabtay wadar caadi Amsterdam dhamaadkii usbuucii hore. Sidee ku dhacday MWC 2020 oo taa badalkeed ISE caadi ayey ahaatay?
Amniga, sababta weyn ee MWC 2020 loo joojiyay
Haddii ay dhacdo inaadan aqoon ISE 2020, waxaad dhahdaa carwadan waxaa lagu qabtaa Amsterdam sannad kasta, iyadoo ah tan ugu muhiimsan waaxda is-dhexgalka adduunka. Iyadoo in ka badan 1.300 oo istaag ah, waa in la ogaadaa in 200 oo ka mid ahi ka yimaadeen shirkadaha Shiinaha. Haddana, si caadi ah ayaa loogu ciiday. Waana taas, intii lagu jiray daabacaddan la soo dhaafay, in ka badan 20.000 oo shirkadood ayaa ka soo qaybgalay dhacdada, 9,8 in ka badan sanadkii ka horreeyay. Maaddaama loo yaqaan 'Coronavirus', 59 shirkadood oo keli ah ayaa doortay in aysan aadin. Iyaga LG.
Dhibaatada? In shirkadaha kale ee muhiimka ah, sida Sony ama Intel, ay joogeen ISE 2020. Taas bedelkeeda, waxay go'aansadeen inay joojiyaan kaqeybgalkooda MWC. Sidee ayey ku tagayaan ISE laakiin ma tagayaan Shirweynaha Caalamiga ee Wareegtada? Hagaag, wax walba waa inay ku xiriiraan cunsur gaar ah: tallaabooyinka amniga.
50.000 kun oo qof ayaa kaqeyb galay caasimada Holland, halka magaalada Barcelona celcelis ahaan laga filaayey 110.000 oo soo booqdayaal ah, marka lagu daro 2.500 oo istaago. Dabcan, shuruudaha looga qaybqaadan karo ISE waxay ahaayeen kaftan. In kabadan wax walboo maxaa yeelay way kartiyeeyeen nadaafada ku habboon carwada, marka lagu daro bixinta lambar taleefan oo loogu talagalay xaaladaha degdegga ah ee caafimaadka. Wax intaas ka badan ma jiraan.
Taabadalkeed, talaabooyinka nadaafadeed ee MWC 2020 aad bay u adkeyd. Marka ugu horeysa, dadka ku sugnaa Shiinaha 14-kii maalmood ee la soo dhaafay looma oggolaan doono inay dhaafaan, marka lagu daro ballanqaadka kordhinta howlaha nadiifinta iyo jeermiska ee qodobbada la wadaago. Kuma filna adiga? Hagaag, kontaroolada ayaa sidoo kale lagu dabaqi doonaa si loo cabiro heerkulka jirka.
Xajmiga keega? ISE, boqolkiiba shirkadaha Shiinaha waxay ahaayeen 18 boqolkiiba, halka MWC ay ahayd 5 boqolkiiba oo keliya. Sidan oo kale, way cadahay in talaabooyinka amniga ee lagu qaadayo Barcelona ay aad uga adag yihiin kuwa ISE. Tanina waxay ahayd sababta dhabta ah ee keentay in munaasabadda la joojiyo.
Waxa aan la fahmi karin ayaa ah in shirkadaha joogga sare ee Sony ay go'aansadeen inaysan kaqeyb qaadan Golaha Caalamiga ah ee Mobile-ka taas bedelkeedana waxay aadaan ISE. Dhibaatadu may ahayn cabbir la'aan, laakiin waa iska soo horjeed. Iyo haa, go'aanka lagu joojinayo carwadda teleefon ee ugu weyn adduunka ayaa dhabarjab adag ku noqotay soosaarayaasha iyo khabiiro ku takhasusay qaybta. Laakiin ma noqon karin go’aan ka fiican kan. Waxa ugu horreeya waa badbaado. Waana inaan eegno waxa ka dhalan kara ISE ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Waa maxay sababta loo joojiyay MWC 2020 laakiin carwooyinka kale ay wali socdaan?
Fiidiyowga ayaa la sifeeyey oo muujinaya sida Microsoft Outlook Spaces u shaqeeyo